Ciidamada Cirka ee Ethiopia oo sheegey duqeyn ku dileen saraakiil Alshabab ah – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Ciidamada Cirka ee Ethiopia oo sheegey duqeyn ku dileen saraakiil Alshabab ah
Ciidamada Cirka ee Ethiopia oo sheegey duqeyn ku dileen saraakiil Alshabab ah
Ciidamada Cirka ee Dowlada Ethiopia ayaa sheegay in shalay ciidamadooda ay dileen 17 xubnood oo katirsan kooxda alshabaab.
bambaanooyinka si lama filaan ah ugu weerartay #Cortile & #Hirkut, ee #Somalia iyagoo isku diyaarinayay in ay weeraraan kolonyo katirsan milatariga itoobiya oo ka safrayay # Dolo illaa #Baidoa si loo gaarsiiyo sahayda militari ee muhiimka ah. Sida uu sheegayo Kornayl Habtom Zenebe, Ciidanka Difaaca FDRE.
Taliye Kuxigeenka Ciidanka Cirka Bariga Howlgalka, howlgalka wuxuu u suuragaliyay dhaqdhaqaaqa xorta ah ee ciidamada Itoobiya inay si daacadnimo ah u gutaan waajibaadkooda dastuuriga ah. Ayuu yoshi korneelku.
Mareykanka oo ciidamo u diraya Ciraaq+ sababta